Yangon | Saturngod
HomeiPhone ZawgyiRoute MapDownloadContactAbout
Leaveareply ရန်ကုန်မြို့ပေါ် ရောက်ရောက်ခြင်း ကြုံတွေ့ရတာကတော့ ရန်ကုန်လေယာဉ်ကွင်းကြီးပဲ။ ဘာမှ ထွေထွေထူးထူး ပြောင်းလဲ မှုမရှိတဲ့ ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ပါပဲ ။ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို တခြားသူတွေတော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ တော်တော်လေးကို သဘောကျတယ်။ အရမ်းရှင်းတယ်။ လမ်းက ဒီတစ်လမ်းပဲ ရှိတယ်။ ချန်ဂီ လေယာဉ်ကွင်းတို့ သုဝဏ္ဍဘူမိ လေယာဉ်ကွင်းတို့လို့ တစ်နေရာသွားဖို့ ဟိုဟာဖတ်ရ ဒီဟာ ဖတ်ရတာတွေ တစ်ခုမှ မရှိဘူး။ ဝင်လည်း ဒီလမ်းကြောင်းပဲ။ ပြန်ထွက်တော့လည်း ဒီလမ်းကြောင်းပဲ။ ထွေထွေထူးထူး ကြည့်နေစရာမရှိဘူး။ custom မှာလည်း အေးအေးဆေးဆေးပဲ။ အရင်ကနဲ့တောင် မတူတော့ဘူး။ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကိုယ် သက်တောင့်သက်တာ ပြန်လို့ရလာတာ ဝမ်းသာစရာပဲ။ အရင်တုန်းကတော့ အိပ်တွေကို ဖွင့်ဖွင့်စစ်လို့ ဖွင့်ရ ပိတ်ရ လုပ်ရတာ တော်တော် အလုပ်ရှုပ်တာ။ အခုတော့ ဘာဆိုဘာမှ မလိုဘူး။ အရင်ကထက် မြန်လည်း မြန်လာတယ်။ အဲ .. အလုပ်လုပ်ချိန်မှာ handphone နဲ့ စကားပြောပြီး လုပ်နေတာလည်း ကတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့။ ဖုန်းကို နောက်မှ ပြောပြီး immigration ဖြတ်တာလေးကို တစ်ချက်လောက် မြန်မြန်လုပ်ပေးလိုက်ရင် တန်းစီရတဲ့ သူတွေ အများကြီး သက်သာသွားမှာပါ။
ရန်ကုန် လေဆိပ်ထွက်ထွက်ခြင်း ခံစားရတာကတော့ ပူပြင်းတဲ့ နေပဲ။ တော်တော်ပူတယ်လို့ ပြောရမယ်။ ရောက်ကာစ ၁ ရက် ၂ ရက် နေ့လည် ၁၂ နာရီ ဘယ်မှ မထွက်နိုင်ဘူး။ အိပ်ထဲမှာ နေ ပန်ကာဖွင့်ပြီး အိပ်နေရတာပဲ။ ရန်ကုန်ကို ၆ လ ကြာမှာ ပြန်ရောက်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လ ထက်စာရင် အများကြီးပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ တခြားသူတွေက မပြောင်းလဲပါဘူးလို့ ဆိုချင်ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော့် အတွက်တော့ တော်တော်လေးကို ပြောင်းလဲသွားတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာ ကားအသစ်တွေ အများကြီးတွေ့ရတယ်။ ကားစျေးတွေလည်း တော်တော်ကျသွားတယ်လို့ ပြောတယ်။ သို့ပေမယ့် စဉ်းစားမိတာက ဒီကားတွေ ပျက်ရင် ဒီနိုင်ငံမှာ ချက်ခြင်း ပြင်ဖို့ လူတွေ ရှိပြီလားဆိုတာ စဉ်းစားမိတယ်။ နောက်ပြီး spare parts တွေကို ဒီနိုင်ငံမှာ မရရင် ထိုင်းကို မှာ ရမှာပဲ။ ကားပျက်ရင်တော့ ပြန်ကောင်းဖို့က အရင်ကထက် ပိုစောင့်ရမလား မသိဘူး။ နောက်ပြီး သူငယ်ချင်းတော်တော်များများက ရန်ကုန်မှာ နေရတာ ပိုပျော်လာတယ်လို့ မြင်လာတယ်။ နိုင်ငံခြားကို အထင်ကြီးတဲ့ စိတ်တွေ တော်တော်လေးကို လျော့လာပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံကို ဂုဏ်ယူတဲ့ စိတ်လေးတွေကို သိသိသာသာလေး တက်လာတာကို တွေ့ရတယ်။ စားဝတ်နေရေး အရင်ကထက် ပိုပြီး ပြေလည်လာတာကြောင့်လည်း ပိုပြီး ပျော်လာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ရန်ကုန် ရောက်ရောက်ခြင်းမှာ ကိုသီဟ တို့နဲ့ အတူတူ 3D ရုပ်ရှင် သွားကြည့်လိုက်သေးတယ်။ ၃၀၀၀ ပေးရပေမယ့် လူကတော့ အပြည့်ပဲ။ Shopping Center အသစ်ဖြစ်တဲ့ Junction Square ဆိုတာလည်း ရောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကြီးပေမယ့် ဘာမှ မရှိသလို ခံစားရတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ မီးပျက်ပေမယ့် အရင်ကလို အကြာကြီး မဟုတ်တော့တဲ့ အတွက် တော်တော် အဆင်ပြေတယ်။ နောက်မို့ဆို ညဘက် အိမ်မှာ လေတိုက် မတိုက်လို့ ပန်ကာဖွင့် မအိပ်ရင် အိပ်လို့ ပျော်မှာ မဟုတ်လောက်ဘူး။
ရန်ကုန် ရောက်တော့ တစ်ခု သတိထားမိတာက Glaxy Notes ကြော်ငြာတွေပဲ။ နေရာ တော်တော်များများ မှာ တွေ့ရတယ်။ လူတိုင်းတော်တော်များများကတော့ Android Huwai သုံးတာ တွေ့တယ်။ အိမ်မှာလည်း Huwai Android ကနေ wifi share ပြီး သုံးတော့ ဘာမှ သုံးလို့မရပေမယ့် facebook လေးတစ်ခုတော့ သုံးလို့ရတယ်။ ရန်ကုန်နဲ့ iOS လုံးဝ အဆင်မပြေဘူးဆိုတာကို လက်ခံသွားတယ်။ Ninja Jump ကို download ချတာ မပြီး။ ဒါနဲ့ ဂျစ်ဆီ တို့ ဆိုင်သွားပြီး download ချလည်း မပြီး။ Internet ဆိုင်မှာလည်း facebook နဲ့ gtalk ကလွဲပြီး ကျန်တာ ထွေထွေထူးထူးသုံးလို့ မရဘူး။ Left Golf3က 700 MB ကျော်တော့ လုံးဝကို update လုပ်လို့ မရခဲ့ဘူး။ ရခဲ့ရင် အဖေ့ iPad ကို update လုပ်ပေးခဲ့မလို့။
ရန်ကုန်နဲ့ အဆင်ပြေဆုံးက Android ပဲ။ APK တွေ ကောက်သွင်းလိုက်ရုံပဲ။ ဘာမှ ခက်ခဲတာ မဟုတ်ဘူး။ iPhone ကတော့ သုံးရတာလွယ်ပေမယ့် internet မကောင်းတော့ download ချရတာ အဆင်မပြေဘူး။ ထူးဆန်းတာကတော့ facebook ကတော့ အေးအေးဆေးဆေး သုံးလို့ ရနေတယ်။ Facebook က browser ကနေ database လှမ်းယူပြီး ထည့်ထားလို့လား မသိဘူး။ အဲဒါလေးတော့ တချက်ကြည့်ကြည့်ရမယ်။ Facebook က မြန်မာက connection ဒီလောက်နှေးတာတောင် ရအောင် ဘယ်လို လုပ်ထားလဲဆိုတာပေါ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ် ၂ နှစ်တုန်းက facebook က မြန်မာနိုင်ငံမှာ တော်တော်နဲ့ ကို မတက်လာတာ အခုက facebook က အမြန်ဆုံး တက်လာတာ ဖြစ်နေတော့ အံဩမိတာ အမှန်ပဲဗျို့။
မြန်မာပြည်ရဲ့ market က online ပေါ်ကနေ download ဆွဲချပြီး ရောင်းတာထက် ဖုန်းဆိုင်မှာ ရောင်းတာ ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ apk တွေ သွင်းတာကိုလည်း ခိုးပြီး သွင်းတာဆိုတာ သိကြရှာမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဖုန်းဆိုင်မှာ သွားသွင်းတယ်။ ပိုက်ဆံပေးလိုက်ရတယ်။ ဒီတော့ ဒီ game တွေ အများကြီး ဝယ်ထားရတယ်လို့ ပဲ ထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်။ ဆိုင်တော်တော်များများမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံက app လေးတွေ ကို ရောင်းထားတာလေးတွေ တွေ့ရတယ်။ သေချာတာကတော့ iphone အတွက် အဲလို လုပ်လို့ မရတဲ့ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ iPhone market က မရှိတာ မဆန်းပါ။ iPhone ထက် Android က မြန်မာ လူထု အတွက် အသင့်တော်ဆုံး လို့ ဆိုရမလိုပဲ။ Android Tablet လေးတွေ တော်တော်များများ ရောင်းလာတာတွေ့တယ်။ သို့ပေမယ့် လူတိုင်းက Tablet ထက် Glaxy Notes ကို ပိုသုံးကြတယ်။ ဖုန်းလည်းဟုတ် Tablet လည်း ဟုတ်ဆိုပြီး သုံးကြတာလား မသိ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ Galxy Notes က မျက်စိထဲမှာ ကိုးလို့ ကန့်လန့် နိုင်နေတုန်းပဲ။ သို့ပေမယ့် သုံးတဲ့ လူတော်တော်များများ အဆင်ပြေကြပုံပါပဲ။
CDMA လေးတွေမှာ 3G ရလာတာကတော့ နည်းနည်း အဆင်ပြေတယ်။ အိမ်ကလူတွေကို Viber နဲ့ ခေါ်လို့ရလာတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် 3G ဖွင့်ထားရင် ပိုက်ဆံက ကုန်ကုန်တယ်နဲ့ တူတယ်။ Data က usages နဲ့ မယူပဲ နာရီနဲ့ ယူထားတယ်နဲ့ တူတယ်။ 3G ဆိုရင်တော့ data ကို usages နဲ့ ယူတာ ပို အဆင်ပြေမယ်။ ဒါမှ Viber ကို ခေါ်ချင်တဲ့ အခါ လှမ်း ခေါ်လိုက်ရုံပဲ။ ရန်ကုန်မှာ တစ်ပတ်လောက်ပဲ နေလိုက်ပေမယ့် တော်တော် နေလို့ ကောင်းတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု မရှိဘူး။ internet မရှိတော့ email စစ်ပြီး စိတ်ဖိစီး နေစရာ မလိုတော့ဘူး။ ရုံးမှာ ဘာဖြစ်ဖြစ် ရုံးရောက်မှ ရှင်းတော့မယ်ဆိုပြီး စိတ်တော်တော်လေး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ထားနိုင်တယ်။
နောက်ပြီး ထူးခြားတာက Skynet တွေပဲ။ နေရာတိုင်းမှာ skynet တွေ တွေ့ရတယ်။ အရင်တစ်ခေါက် ပြန်တုန်းကတော့ မီးကပျက်။ ညဘက် ရောက်ရင် မှောင်မှောင်မည်းမည်းထဲမှာ ipad လေးနဲ့ game ဆော့ခဲ့ရတယ်။ အခုတော့ ညဘက် ရောက်ရင် skynet လေး တစ်ရောက်တည်း ကြည့်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး အနားယူလို့ရတယ်။ Skynet က စျေးလည်း ချိုသာတယ်လို့ ပြောတယ်။ Skynet နေရာတိုင်းမှာ လူတိုင်း တတ်နိုင်လာသလို internet ကိုလည်း စျေးသက်သက်သာသာ နဲ့ ရရင် ဘယ်လောက် ကောင်းလိုက်လေ မလဲလို့ စဉ်းစားမိတယ်။ အခုတော့ ဆိုင်သွားလဲ Skynet ။ သူငယ်ချင်း အိမ်သွားလည်း Skynet နဲ့ ။ အိမ်မှာကလည်း Skynet နဲ့။ တိုက်တော်တော်များများရဲ့ ဝရံတာ မှာ skynet တွေ တပ်ထားတာကို တွေ့ရတယ်။
ဘာပဲ ပြောပြော ရန်ကုန်က ၆ လ အတွင်းမှာ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ အများကြီး ပြောင်းလဲသွားတယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in nothing and tagged myanmar, yangon on May 9, 2012 by saturngod. Post navigation
Ava 1.1 →
မလုပ်ချင်ဘဲ ကြိုးစားပြီးရသော အောင်မြင်မှုသည် အကျိုးမရှိ။ လုပ်လိုသော အလုပ် လုပ်နေခြင်းသည် ကြိုးစားနေရသည်ဟု မမှတ်ချေ။ — saturngod Job Vacancy From MZ ForumWe want JAVA Programmer !!!!Seeking volunteers forawordpress.com blogSenior ProgrammerOpen source senior programmer and Project Manager post at Tbit SolutionJOB OPPORTUNITYFreelance to write the project with Java springService Technician (၁) ဦးအလိုရှိသည်IT AdministratorPHP Web Developer (Urgently)Senior Web Front-End Developer ၃ ဦးFacebook Tweets by @saturngod